Xabsi daa'in lagu xukumay hogaamiyehii burcadii Södertälje - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Simon Paulin/ Scanpix
Xabsi daa'in lagu xukumay hogaamiyehii burcadii Södertälje
La daabacay onsdag 1 augusti 2012 kl 15.30
31- sanno jirkii loo haystay in uu yahay hogaamiyaha burcada Södertälje ayey maxkmada Södertälje ku xukuntay xabsi daa'in. Rag kale oo la eedeysanaana xambisyo dhaadheer ayaa lagu xukumay.
31-sanno jirka ayaa lagu helay sagaal faldenbiyeed oo kamid tahay ka danbeyn dil, afduub, hanjabaad sharci daro ah iyo qasab sharci dario ah. Waxa uuna xukunkiisa noqday xambisi daa'im. Sdioo kale nin ay kharaabo yahiin ahaana gacanta midig 31-sanno jirka ayaa asna lagu helay in uu gestay dil, gacana ka geystay labo dil oo kale. Waxaa lagu xukumay 12 sanno oo xarig ah.
Maxkmadan ayaa lagu tilmaamay in ay tahay tii ugu horaysay oo rag maffia ah Sweden maxkmad lagu soo istaajiyey. Ugu yaraan labaatan qof ayaa maxkamda la soo istaajiyey balse lix iyo toban kamid ah ayey maxkmado xukuno dhaadheer iyo kuwo gaagaaban isku jira ku riday. Xabsiga ugu yar ayaa ah hal-sanno iyo afar bilood oo xarig ah
Go'aanka maxkamda Södertälje oo beri la filayo